Siyaasada xisbiga Moderaterna (M) oo u dhawaatay SD | Somaliska
Siyaasada xisbiga Moderaterna (M) oo u dhawaatay SD
Xisbiga Moderaterna (M) ayaa shalay soo bandhigay qorshehooda ku aadan arimaha socdaalka iyo soo galootiga, iyagoo u muuqda in ay ku socdaan wadada xisbiga cunsuriga ah ee SD. Moderaterna oo looga adkaaday doorashadii sanadkii hore ayaa waxay bilaabeen in ay ku halaan luuqada SD isla markaana ay qeyb ka soo goostaan siyaasada SD ee ku dhisan in la adkeeyo wadooyinka ay magangalyo doonku ku soo galayaan Sweden.
Xisbiga M oo shalay soo bandhigay siyaasadooda ku aadan soo galootiga, ayaa waxaa ka mid ah qodobada ay shaaciyeen in qofka doonaya in familkiisa lala mideeyo lagu xiro in uu shaqo haysto, in dadka qaxootiga ah la siiyo sharci ku meel gaar ah iyo in dadka caruurta isku dhiiba laga wareejiyo guryaha ay hada ku noolyihiin si hoos loogu dhigo qarashka ku baxaya. Waxay sidoo kale sheegeen in dadka waxbarashadooda hooseyso loo diido in ay Sweden ku soo galaan viso shaqo.
Wargeyska Expressen ayaa waydiiyay Elisabeth Svantesson oo xisbiga M u qaabilsan arimaha suuqa shaqada, in qorshahooda cusub uu yahay in ay cododka ka soo goostaan SD? Iyadoo ku jawaabtay in siyaasadooda aysan waxba ka galin SD balse ay doonayaan in ay sameeyaan isbadalada loo baahanyahay in lagu sameeyo nidaamka isdhexgalka.
Si kastaba ha ahaatee, waa iska cadahay in xisbiga M uu waagu ku baryay markii looga adkaaday doorashadii hore isla markaana ay cadaatay in qaar badan oo ka mid ah taageerayaashooda ay codkooda siiyeen SD. Hadda ayay bilaabeen in ay muujiyaan wajigooda dhabta ah iyagoo doonaya in ay geed dheer iyo geed gaaban u fuulaan sidii ay SD cododka uga soo ceshan lahaayeen taasoo ah in ay siyaasadooda wax ka badalaan oo ay nolosha ku adkeeyaan dadka soo galootiga ah.
June 26, 2015 at 22:49
Xisbiga M markii uu iska casilay siyaasi Ranfeld siyaasadooda waxey u leexatay SD marka layaab maleh xisbi walbo markuu xalsooni shacab raadinaayo waxuu dabadhigtaa Soogalooti taasna waa wax lagu yaqaano Xisbiyada.
Waxa nasiib darro ah in Jimcale aad webka magaciisa ugu magac dartay SOMALISKA adigoo akhbaar soomaalida uga xaqiiq warranta dalka aadan soo gelineyn marka laga reebo taageero siyaasadda garabka bidix ah. Fadlan soomaalida u sheeg in webku yahay mid loogu ololeeyo siyaasadda xisbiyada garabka bidix ee sweden ee aanuu dhexdhexaad ahayn. Haddii aad xaqiiqda ka hadleyso gudbi xogta dhabta ah ee ay dhamaan mediaha sweden sii daayeen.http://www.expressen.se/nyheter/politik/alliansen-ska-granska-sverigedemokraterna/.
Cabdi khaalid says:
Journalkaan ma cunsuribaa mise?:
waar yarkan jimcaale wax aad ku qososhuun buu soo qorayaa maalin walba